Aramagedona. BNL Ministries - mg27
Boky misy Fanambarana mifanesy.
Ity pejy ity dia fitambarana eritreritra sy ny Soratra Masina mikasika ny fisehoan-javatra amin’ny Farandro. Satria fantatsika fa "Andriamanitra dia Izy mihitsy no Mpandika", ny fisehoan-javatra sasany dia mety tsy ho fantatra tanteraka mandra-pitrangan’izy ireo.
Ary nangoniny ho any amin'ny tany atao amin'ny teny Hebreo hoe Aramagedona ireny. Apokalipsy 16:16.
Hollywood dia nanome antsika ny endriky ny Ara-magedona tahaka ny fandringanana tanteraka ny Tany. Fa dia marina ve izany?
Ny teny hoe Aramagedona dia avy amin'ny teny grika roa "Har" izay midika hoe ny havoana, na tendrombohitra, sy Meggido, toerana any Isiraely. Izany no toerana hitrangan’ilay ady farany eo amin’ny tafiky Kristy sy ny miaramilan’ny anti-kristy atao. Ary satria izany dia ny faharesen’ny Antikristy, sy ny miaramilany, dia tsy ny fandringanana tanteraka ny Tany. Mbola misy ny Arivo Taonan'ny Fanjakan’i Kristy, izay antsoina hoe Millenium. Hofatorana i Satana mandritra izany fotoana izany, ary noho izany eto an-tany dia hisy fiadanana.
Ny Hery Iraisam-pirenena dia manao fahirano an’i Jerosalema.
Zakaria 12:2 Indro, Izaho hanao an'i Jerosalema ho kapoaka mampiraikiraiky ho an'ny firenena rehetra manodidina; ary ny Joda koa hiharan'izany, amin’ ny hanaovana fahirano an'i Jerosalema.
Fa, indro, amin'ireo andro ireo sy amin'izany fotoana izany, raha hampodiko ny Joda sy Jerosalema avy amin'ny fahababoany, Dia hangoniko ny jentilisa rehetra ka ho entiko midina ao amin'ny Lohasahan'i Josafata*, ary ao no hifandaharako aminy noho ny amin'ny Isiraely, oloko sy lovako, izay naparitany tany amin'ny jentilisa; Ary nozarazarainy ny taniko,[Josafata = Jehovah no mitsara]
Hisy Hery Iraisam-pirenena ho avy amin'ny tora-pasiky ny Isiraely, amin'ny ezaka mba hanafaka ny tanànan'i Jerosalema. Ny Baiboly dia miresaka ny "firenena rehetra". Izany raha ny hevitro dia tsy midika "ny olona rehetra eto an-Tany", fa midika hoe ny Herin’ny Firenena Mikambana Force, izany hoe "ny firenena rehetra".
Ny Fotoanan’ny Jentilisa.
Jesosy nilaza ao amin’ny Lioka 21:24 “Dia ho ringana amin'ny lelan-tsabatra izy ka ho entina ho babon'ny firenena rehetra, ary Jerosalema hohitsahin'ny jentilisa mandra-pahatanteraky ny andron'ny jentilisa.”
Mazava izany amintsika fa miaina amin’izany fotoana izany isika, izay noresahan’i Jesosy.
Maneho ny Tenany amin’ny Jiosy Kristy.
Zakaria 12:10-11 Ary haidiko amin'ny taranak'i Davida sy amin'ny mponina any Jerosalema ny fanahin'ny fahasoavana sy ny fifonana, ka hijery Ahy Izay* nolefoniny izy, ary hisaona Azy toy ny fisaonana zanakalahy tokana izy sady halahelo Azy toy ny fahalahelovan'ny olona ny lahimatoany.[na: ka hijery ilay] Amin'izany andro izany dia hisy fisaonana lehibe any Jerosalema toy ny fisaonana tao Hadadrimona eo amin'ny lohasaha Megido.
Izany dia mitranga amin'ny fotoana hanambaran’i Kristy ny Tenany amin’ny Jiosy. Ny tantaran'i Josefa ao amin'ny Baiboly, dia karazan’ity zava-mitranga ity. Nanala ny olona rehetra tsy ho eo anatrehany Izy, ka nanambara ny Tenany amin'ny rahalahiny.
Romana 11:26-27 Ary amin'izany dia hovonjena avokoa ny Isiraely rehetra, - araka ny voasoratra hoe: Hivoaka avy any Ziona ny Mpanafaka, Ary hampiala ny haratsiam-panahy amin'i Jakoba Izy; Ary izao no fanekeko aminy, raha manaisotra ny fahotany Aho.
Amin'ny faran'ny Millenium, dia hovahana i Satana, ary ilay ady amin'ny "Goga sy Magoga" hitranga.
Fa raha ny fanariana azy ireo no fampihavanana izao tontolo izao, tsy ho fitsanganana* amin'ny maty ny fandraisana azy?
Ampidiro mifandraika ireo hafatra.
NY TAOM-PIANGONANA LAODIKIA.
Anointed ones at the End time.
A lafiny tendrombohitra,
ary nitsangana voaroy
Lisy ny afo.
Ny Andry Afo
Andriamanitra dia manana
Izy manana anarana
olombelona iray ihany.
Ary izany anarana
izany dia i Jesosy.